Public Health in Myanmar: Lesions on penis ကျားလိင်တံ အနာများ
STI ဖြစ်ရင် အိမ်က မိန်းမ၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ရဲ့ လိင်ဆက်ဆံဘက်ကိုပါ အတူတူ ဆေးကုဖို့ လိုကြောင်း၊ ဘာကြောင့် လိုအပ်ကြောင်းလေးပါ ပြောပေးပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
ဖြစ်နေကျတွေက ယောက်ျားက မိန်းမ မသိအောင် ဆေးကုထားပြီး မိန်းမက ကလေးမွေးခါနီး စစ်မှ ဆစ်ဖလစ်ပိုး တွေ့တာမျိုး ဖြစ်တတ်တာ။
အဲဒီအချိန်မှာ သူတို့က မေ့နေလောက်ပြီဆိုတော့ မိန်းမကို ဘယ်ကရလဲလို့တောင် ပြန်စွပ်စွဲတတ်ကြသေးတာ။
အဲလိုနဲ့ ကွဲတဲ့ စုံတွဲတွေတောင် ရှိဖူးပါတယ်။
Thank you Sayar!
No , I'm Sayama :P
holly htun said...
ဆ၇ာ ကျွန်တော် ဂွေးဥ အတွင်းအိတ် ဥပေါ်မှာအကြိတ်လုံးလိုနှစ်လုံးဖြစ်နေလို့ပါဆ၇ာ..ဘယ်ဆ၇ာဝန်နဲ့ပြ၇မလဲမသိဘူး ဆ၇ာ ညွန်ကြားပေးပါ ဆ၇ာ
ဂွေးဥ အတွင်းအိတ် ဥပေါ်မှာ အကြိတ်လုံးလို နှစ်လုံး
စာနဲ့မေးတာမို့ မျက်စိနဲ့ကြည့် လက်နဲ့စမ်းရသလို မသေခြာတာမို့ မှန်းပြီး ရမ်းကုလုပ်ရတော့မှာဘဲဗျာ။
ယောက်ကျားတွေ ကပ်ပယ်အိတ် ခေါ် Scrotum တ၀ှိုက်မှာ ဖြစ်တတ်တာတွေက အမျိုးပေါင် (၁၃)ခုတိတိ ရှိပါတယ်။ မကြောက်ပါနဲ့။ အများစုရောဂါတွေက ကုတာလွယ်ပြီး ပျောက်ဘို့ မခက်ကြပါ။
Inguinal hernia အူကျရောဂါ၊ Testicular torsion အစေ့လိန်ခြင်း၊ Hydrocele မုတ် (မုတ္တ) ခေါ် အရည်များခြင်း၊ Epididymal cyst အစေ့အထက်နားအိတ်ဖြစ်ခြင်း၊ Epididymo-orchitis အစေ့-အကြောရောင်ခြင်း၊ Haematocele မုတ် (မုတ္တ) အရည်မဟုတ်ဘဲ သွေးဖြစ်နေခြင်း၊ Hydrocoele of testis အစေ့တွင် မုတ်ဖြစ်ခြင်း၊ Lipoma of spermatic cord အကြောမှာ အဆီအိတ်ဖြစ်ခြင်း၊ Mumps မော်နာ ဒါမှမဟုတ် ပါးချိတ်ရောင်နာနှင့် ဆက်နေသော ကူးစက်နာဖြစ်ခြင်း၊ Scrotal haematoma အိတ်ထဲသွေးယိုခြင်း၊ Varicocoele သွေးပြန်ကြောများထုံးခြင်း။ Spermatocele အစေ့အပေါ်တွင် သုတ်ပိုးများစုနေခြင်း၊ Testicular cancer အစေ့ကင်ဆာဖြစ်ခြင်း၊
ရောဂါအားလုံးအနက် တခုကလွဲရင် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ဆိုင်တာချည်းဖြစ်လို့ ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကို ပြရပါမယ်။ အထူးကု မဟုတ်တဲ့ ရိုးရိုးဆရာဝန် (ကျွန်တော်တို့လို ဂျန်ဂယ်)တွေကလဲ အတော်များများ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ခွဲရဦးတော့ မခက်တာတွေပါ။ ဆရာဝန်ပေါက်စများ လက်သင်စမ်းကြရတာ ဒီရောဂါတွေမို့ပါ။
Re: No , I'm Sayama
ဆောရီး၊ ကျွန်တော်မှားတာ တခါမဟုတ်ဘူး။ တလောက စင်္ကာပူကနေ ဆေးခန်းလေးအတွက် လှူချင်သူတဦးနဲ့ အပြန်အလှန် အီးမေးလ် နဲ့ ရေးတြတယ်။ နာမယ်ဖတ်ပြီး တရုပ်လို့ ထင်ပြီးရေးမိတယ်။ နောက် ရှမ်း-တရုပ်-ဗမာ ကပြားဖြစ်နေရော။ ဒါနဲ့ ဦ့း့ ခင်များလို့ ကိုယ့်အမှား ပြင်လိုက်ပြန်တယ်။ ဆောရီးပေါ့။ နောက်တခါ အသံဖိုင်နဲ့ လာပါလေရော၊ အမျိုးသမီးကြီးတဲ့ဗျာ။
ကိစ္စ မရှိပါဘူး ဆရာ။
လာပြီး ရေးပေးနေတာ၊ မေးခွန်းတွေ ဖြေပေးနေတာကို အရမ်း ကျေးဇူတင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သော၉နှစ် လောက်ကသေးသးလေးတစ်လဲုးထဲပါ။ နောက်၎ နှစ်လောက်ကျတော့ တစ်လဲုးထပ် ပေါ်လာပါတယ်။ဆန်စေ့ လောက်၇ှိပါတယ်..တစ်ခါတလေကျ၇င် လက်လေးနဲ့သွားစမ်းကြည့်၇င် အောင့်ပါတယ်...စမ်းကြည့်၇င်မအောင့်တာများပါတယ်..တစ်ခါတလေကျ၇င်တော့ သေးသွားပါတယ်..အနေအထားပြောင်း၇င်လည်း သေးလိုက်ကြီးလိုက် ဖြစ်ပါတယ် ဆ၇ာ....
ဆရာ ယောက်ကျား တစ်ယောက် လိင်တံ ဟာ လိင် ဆက်ဆံ ဖိုအတွက် ဘယ်လောက် ရှိသင် ဘာလဲ ဆရာ ပြည်ပြည်စုံစုံပြောပြပေးပါဆရာ အမှားပါပါသွာရင်း ခွင်လွတ်ပါဆရာ
I think the problems with both men and women are ' what should ?' .. actually , you should believe what you have are correct size.
Please just beware of all the risks you will take if you decided to have an unsafe sex.
aar kar said...
ဆရာ သာနာမည်က အာကာပါ ရန်ကုန်ကပါ အသက်က၂၂ သားအင်္ဂါမှာရေကြည်ထုလေးတွေပေါက်နေတာ၁ပတ်လောက်ရှိပြီ ဆေးတော့သောက်နေတယ်မပျောက်လို့လမ်းညွန်ပေးပါဦး
ကာမဆက်ဆံအပြီးမှာ သုတ်နဲ့သွေး ရောထွက်တယ်ဆရာသွေးခဲတွေလည်းပါပါတယ်
July moe said...
ဆရာကျွန်တော့လိင်တန် ထဲ က ပြည်လို အရည်တွေ ထွက်တာ ဘာကြောင့်လဲ
Singer Mc Arli said...
Ko Chann said...
ဆရာ ကျွန်တော်လည်း ကျွတ်တော်လိင်တံအပေါက်ကနေ ပြည်လို အရည်လေးတွေ နည်းနည်းချင်း စိမ့်ထွက်နေပါတယ်ဆရာ။
ဒီနေ့မှ စဖြစ်တာပါ ဆရာ။ ဘာလက္ခဏာလဲ၊ ဘာဆေးတွေသောက်ရမလဲ ဆရာ ညွှန်ကြားပေးပါဦး။ အပြောအဆိုမှာလျှင် တောင်းပန်ပါတယ် ဆရာ။
min thine naing said...
ကျနော်မထင်မှတ်ဘဲ သွေးသွားစစ်တာ ဆစ်ဖလစ် + positive ပြထားတယ်။ ဆေးပညာအသုံးနုံးဆိုတော့ နားမလည်ဘူး ဘာpositive လဲပေါ့ ဆရာဝန်တွေကလဲ ဘာမှာပြောပြာဒါ အသိပေးဒါမျိုးမရှိဘူး...ဒါနဲ့ positive ပြထားတဲ့ ဘဲနားကစာကို google ထဲလိုက်ရှာကြည့်တော့ ဆစ်ဖလစ် ဖြစ်နေတယ် ကာလသားရောဂါလို့လဲ ပြောထားတယ် အဲဒါနဲ့သွေးစစ်ပေးတဲ့ ဆရာဝန်ဆီပြန်သွားပြီးမေးမြန်းကြည့်တော့ ဆစ်ဖလစ်ရှိနေတယ် ဒါဘေမဲ့မသေချာသေးဘူး ထပ်သေချာချင်ရင် နောက်တစ်ခါထပ်စစ်ဖို့ပြောတယ် ထပ်စစ်လိုက်တော့ ဆစ်ဖလစ်သေချာတယ်လို့ ဆရာဝန်ကပြောတယ် ခု penicillin ထိုးဒါ နှစ်ခါရှိပါပြီ နောက်တစ်ခါကျန်ပါသေးတယ်။
ကျနော်သိချင်ဒါက သွေးသွားစစ်တဲ့နေ့မှာဘဲ ကျနော့်မိန်းမနဲ့ အတူသွားစစ်တာပါ သွားစစ်တုန်းက နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ဖို့ပါ ။
သွေးအတူစစ်တာ ကျနော့်မိန်းမကတော့ negative ပြတယ် ကျနော်က positive ပြတယ် ။
ကျနော့်က ဖာလဲမလိုက်စားပါဘူး ကျနော်ထိုင်းမှာနေဒါပါ အရင်က ထိုင်းအမျိုးသမီးနဲ့တော့ အိမ်ထောင်ကျဖူးတယ် အဲတုန်းကလဲသွေးစစ်ဖူးတယ် ကျနော်လဲသတိမထားမိဘူး ဆရာဝန်လဲဘာမှမပြောဖူးဘူး သွေးစစ်လက်မှတ်တွေကလဲ ထိုင်းအစိုးရကိုပေးရဒါဆိုတော့မသိမ်းဖြစ်ဘူး။
ဆရာ့ page ထဲမှာ ရေးထားသလိုမျိုး ရောဂါလက္ခဏာတွေ ဖြစ်တာတော့ ၆ လလောက်ရှိခဲ့ပြီ ပထမ လက်တွေမှာ ဝဲလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ် အိမ်ထဲမှာ အရမ်းပူလို့ဖြစ်တယ်လို့ထင်မိတယ် နောက် တစ်လ နှစ်လလောက်ကြာတော့
အင်္ဂါမှာ အသီးလေးနှစ်လုံးသုံးလုံးလာပေါက်တယ် အဲဒါမတိုင်ခင် မနာဘူး အင်္ဂါမှာအဖတ်ဖတ်တွေဂျီးတွေလိုမျိုးအဖြူ ဖတ်တွေဖြစ်နေတယ် လက်နဲ့ပွတ်လိုက်ပြီးရေဆေးလိုက်တော့ ပွန်းရာလိုကျန်နေပြီးအနာဖြစ်သွားတယ် ဆေးတွေဘာတွေထည့်လိုက်တော့ ပျောက်သွားတယ် ။
ကျနော်သိချင်ဒါက ဆေးသုံးခါထိုးပြီးရင် စိတ်ချရပါပြီလား ။ ကျနော့်မိန်မးကရော လုံးဝမရှိဘူးဆိုဒါ စိတ်ချရနိုင်ပါသလား ။ မိန်မနဲ့ပေါင်းလာခဲ့ဒါ၆ နှစ်လောက်ကြာပါပြီ ကလေးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ် ခုလိုတွေဖြစ်တာက ဒီခြောက်လလောက်မှာမှဖြစ်တာ ကျနော်လဲစဉ်းစားလို့မရဘူး ဘယ်လိုရလာမှန်းလဲ မသိတော့ဘူး။
ကျေးဇူးပြုပြီး ရှင်းပြပေးပါဆရာ။ ကျနော့်ဇနီးလဲအရင်က အိမ်ထောင်ရှိခဲ့ဖူးတယ်
ကျနော်ကသူ့ဆီကကူးတယ်လို့ထင်ဒါဒါဘေမဲ့သူက negative ပြတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ခြောက်နှစ်လောက်က ထိုင်းအမျိုးသမီးနဲ့နေတုန်းကလဲ အင်္ဂါမှာ အဖြူ ဖတ်တွေတစ်ခါလာဖြစ်ဖူးတယ် ။
သားသမီးတွေအတွက်ရော အမျိုးသမီးအတွက်ပါစိတ်ပူမိလို့ အကြံကလေးပြုပါဆရာ။
aungsun 375 said...
ဆရာ ကျွန်တော့မှာကြွက်နို့လို့ထင်ရတဲ့ အနားလေးငါးလုံပေါ်နေပါတယ်။လက်နဲ့စွဲဖဲ့ရင်စက်ပြီးတော့သွေးလည်းထွက်ပါတယ်ဆရာ။ဘယ်လိုကုသမှု့လုပ်ရမလဲပြောပေးပါဆရာ။
အတံ ပေါ်မာ အရည် ဖု ပေါက်နေတာ ဘာဆေးတွေ မှီဝဲရမလဲ ဆရာတို့ linlin50086196@gmail.comကိာပိုပေးပါဖစ်နိုင်ရင်